Fiara mitondra fiara ho an'ny vata fampangatsiahana
BlackSheilds VcoolingShields andiany vata fampangatsiahana dia natao ho toy ny vahaolana amin'ny fanaraha-maso ny toetrandro ho an'ny lozisialy rojo mangatsiaka. Ny vondrona dia napetraka soa aman-tsara sy azo itokisana ho an'ny fiara fitaterana mavesatra / antonony / maivana miaraka amin'ny endri-javatra avo lenta, azo itokisana avo lenta, habe kely, mangatsiaka haingana sns.
Ny andian-dahatsoratra BlackShields EC dia natao ho vahaolana fanaraha-maso ny toetr'andro ho an'ny rafitra fitahirizana angovo bateria (BESS). Raha jerena ny fangatahana fanaraha-maso mafana ho an'ny bateria sy ny firafitry ny fitoeran-jiro fitahirizana angovo, ny rivotra dia natao ho vahaolana azo antoka sy mahomby amin'ny fanaraha-maso ny toetr'andro miaraka amin'ny rafitra ambony ambony, ny fikorianan'ny rivotra lehibe ary ny famatsiana rivotra avy any an-tampon'ny fitoeran-drano.
BlackShields MC andian-tsarimihetsika fampangatsiahana rano dia chiller rano izay natao hifehezana ny toetran'ny rafitra fitahirizana angovo bateria. Miaraka amin'ny famolavolana mono-block, rafitra matevina, fivoahana ambony, akaikin'ny loharano mafana, haavon'ny hafanana manokana, tabataba ambany ary valiny haingana, ny vondrona fampangatsiahana ranoka dia mety ho vahaolana mangatsiaka sy azo antoka ho an'ny BESS
BlackShields EC series monoblock air conditioner dia natao ho vahaolana fanaraha-maso ny toetr'andro ho an'ny rafitra fitahirizana angovo. Raha jerena ny fangatahana fanaraha-maso mafana ho an'ny bateria sy ny firafitry ny fitoeran'entana fitahirizana angovo, ny rivotra dia natao ho vahaolana azo antoka sy mahomby amin'ny fanaraha-maso ny toetr'andro miaraka amin'ny rafitra monoblock, ny fikorianan'ny rivotra lehibe ary ny famatsiana rivotra ambony.
AC air conditioner ho an'ny kabinetra indostrialy ivelany
Ny Air conditioner BlackShields AC-P dia natao hifehezana ny toetr'andro ao amin'ny kabinetran'ny herinaratra sy fialofana amin'ny tontolo anatiny sy ivelany sarotra. Miaraka amin'ny fikorianan'ny rivotra lehibe sy ny halavirana lavitra ho an'ny famatsiana rivotra, dia mamaha ny olana amin'ny hafanana sy ny hamandoana ao amin'ny kabinetra anatiny / ivelany izany ary safidy tsara ho an'ny fampiharana telecom.
AC air conditioner ho an'ny kabinetra indostrialy anatiny
BlackShields AC-L Series Air conditioner dia vahaolana fampangatsiahana indostrialy izay apetraka eo amin'ny sisin'ny kabinetra avo sy tery miaraka amin'ny fizarana tsy mitongilana sy mitsangana amin'ny loharano mafana amin'ny tontolo anatiny sarotra. Mamaha ny olana amin'ny hafanana sy ny fametrahana ny kabinetra samihafa.